SCHNOODLE DOG BREED PICTURES, 3 - ALIKA
Schnauzer / Poodle Alika mifangaro
Buster the Schnoodle (Black Schnauzer / Poodle mix) amin'ny faha-7 taonany
ny fako alika kely Schnoodle , sary natolotr'i Schnoodles avy any Bexley
Lexi the Schnoodle toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro
Ity i Annie amin'ny 9 herinandro. Izy dia fifangaroan'ny Poodle / Schnauzer mahafinaritra any Dallas, Texas. Tena mora nampiofanina izy, tena marani-tsaina ary afaka manavaka ny baolina sy ny kilalao hafa. Izy dia milalao, nefa be fitiavana, ary voavonjy avy amin'ny Humane Society eo an-toerana.
maninona ny orona no mivadika volontany ny orona
Cody ny apricot Schnoodle amin'ny 6 volana
zanak'alika alika omby anglisy fotsy
Cody ilay apricot Schnoodle dia toa fotsy rehefa avy namboarina fohy ny palitaony. 10 volana izy amin'ity sary ity.
Cody the Schnoodle amin'ny faha-3 taonany
Kaya the Schnoodle mainty sahabo ho 1 taona eo ho eo - voajanahary amin'ny endriny rehetra izy ary tsy nokapaina mihitsy.
I Samantha a parti Schnoodle ity dia alika kely amin'ny 11 herinandro. Miantso azy hoe 'Sammi' fohy ny tompony, satria tomboy izy! Tia mihanika ny vavahadiny ary miditra ao amin'ny fanasana vilia! Fa amin'ny ankapobeny, doggie mahafatifaty izy. Amin'ny 11 herinandro dia mandeha tsara amin'ny lalàna famakiana trano izy.
mpiandry mpiandry alemanina mix mix
Schnoodle rahavavin'i Mookie (ankavia) sy Buffy (ankavanana)
Mazy amin'ny 1 ½ taona miala sasatra eo akaikin'ny pisinina
Angel Noelle io. Schnoodle 2 taona izy. Milanja 9 pounds izy ary 12 santimetatra ny halavany. Tena marani-tsaina sy be fitiavana izy. Hoy ny tompony: 'Izy dia mahafinaritra sy mpiara-miasa lehibe. Izy no fitiavan'ny fiainako. '
boston terrier afangaro amin'ny bulldog
Mastiff anglisy 8 herinandro
mixer spaniel akoho volamena kely